> Resource > Video > FLV in DivX Converter: Sida loo Beddelaan FLV in DivX
Doonayaa inaan u ciyaaro FLV videos ku haboon ee la qaadi karo qalabka computer ama taageera qaab Divx natively? Iyaga diinta Divx video dhibaato soo gani maayo arrin incompatibility mar iyo weligiis. Qaab Divx, qoreysa abuurka tayo sare leh oo ku guuleystay taageero ballaaran ka ciyaaryahan ee ugu warbaahinta la qaadi karo laga heli karo, waa la shaki ku jirin ah oo qaab doorasho fiican ee loo maqli karo. Si taas loo sameeyo shaqadaan, waxaan jeclaan lahaa in la wadaagto Converter video in uu yahay awood inay sameeyaan qaab beddelidda, sameecadda ah oo aan kelmadaha ah, oo hawshan samee, 30X dhakhso competeing la badeecada ka dhacay suuqa maanta la mid ah.
Taasi Wondershare Video Converter . Waxaa ku guuleystay comments jecel ka malaayiin dadka isticmaala ay u fududaato in ay, ku oolnimada iyo tayada sare leh. Hoos waxaa ku qoran talaabo talaabo hage u noqon doonaa caddayn wanaagsan. Haddii aad rabto in aad si loogu badalo FLV in Divx ee Mac, kaliya tagaan si ay Mac version: Wondershare Video Converter u Mac . Loogu talagalay fududahay in la isticmaalo, ma ha kugu samayn doonaa.
Free download FLV in Divx Converter (version maxkamad):
Talooyin: Tani software Video Converter sidoo kale aad u saamaxaaya in ay soo bixi videos FLV ka 100 goobood video qaybsiga, sida YouTube, Facebook, Google, VEVO, vimeo, iyo in ka badan.
1 Import FLV video barnaamijka
Si aad ku dari videos FLV in barnaamijkan, laba hab fudud ayaa la siiyaa:
Riix ah "Add Files" button xitaa folder file aad;
Jiid jeedi oo iyaga si toos ah u furmo suuqa barnaamijka.
Dhammaan files muxaafidka tusi doonaa sida thumbnails furmo barnaamijka, waxaad astaysto magaca saarka faylka, ku dar subtitles, ama iyaga ku milmaan galay mid ka mid file weyn.
2 Dooro Divx sida qaab wax soo saarka
Barnaamijkaani wuxuu bixiyaa noocyo kala duwan oo qaab iyo qalab doorashada si aad u doorato. Si aad u dhoofiyaan files Divx, fadlan guji qaab icon ka dibna dooro "Qaabka"> "Video"> "Divx" ka furmo suuqa qaab wax soo saarka.
Fiiro gaar ah: Divx waa codec in qaniinaa aad video, waxa uu inta badan ku duudduubtay oo qaab AVI ah. Sidaas dhab ahaan waxaad heli doontaa qaab AVI in Tifaftirayaasha la codec Divx ah.
3 Edit FLV videos istareexsan (optional)
Waase in aad rabto in aad ka mid ah qayb ka mid aan loo baahnayn ka FLV videos saarto, ama ku milmaan dhowr videos for FLV loo maqli sahlan, oo aad isticmaali karto oo ay feature tafatirka sim si aad ku gaarto istareexsan. Riix badhanka edit ka sokow video kasta oo horyaalka ah, in aad suuqa kala Edit tagi doonaa. Halkan, oo dhan itusi caadiga ah sida goo, Dalag, isku beddesha, Dheellitir Saamaynta, dar subtitles ayaa dhamaantood ka mid ahaa.
4 Start FLV in convesion Divx
Ka dib markii aad doorato qaab wax soo saarka, waxaad riixi kartaa icon Play in ay ku eegaan saameynta wax soo saarka. Haddii wax walba u dhacaan sida aad jeceshahay, kaliya ka dhacay button badalo ku geeska midig hoose oo ka mid ah ay Converter Video . Kolkiiba, aad arki doonaa bar horumarka diinta muujinaya Boqolkiiba ka buuxiya iyo waqtiga ka harsan tahay.
Hambalyo! Waxaad ayaa si loogu badalo files FLV in Divx video on your u gaar ah. Hadda waxaad ka ciyaari kartaa FLVs ciyaartoyda warbaahinta la qaadi karo on go ah.
Fadlan halkan ka heli tutorial ah.
FLV Video Recovery: Ladnaansho tirtiray ama u Khasaaray FLV Videos
top 6 video downloaders 4k xor ah oo daaqadaha iyo Mac
Sida loo sameeyo Halloween Bocor ah ee bilowga ah
5 Siyaabaha Qor Facebook Video baaqayaa
Movavi Video Converter Alternative: dhakhso ah, qaabab More, Initiative
Sida loo soo dejinta MTS in Adobe Ciyaar (CS3 / CS4 / CS5 / CS6 ka mid ah)
Top 10 Popular Video Sharing Shabakadaha Review